Friday November 09, 2018 - 03:28:15 in Wararka by Super Admin
8 November malinta Cadaalad-dara Somaliland... Garwicii hanaanka Wada-yeelasho ee Xisbiyada.. Daahana ka qaaday mid ka mida ujeedadii Madax-wayne Siilaanyo ugu magacaabay Adan Haji Cali Gudomiyaha Maxkamada Sare. Qalinkii garyaqaan cabdale dahir ade
Malintani waxay dhashay:-
1- Garwicii hanaanka Wada-yeelasho ee Xisbiyada Siyaasada, waxayna meesha ka saartay xaqay bulshadu u lahayd in ay ka qayb-galaan Isla markaana maal-gashadaan Xisbiyada Siyaasada.
2- Meeshana ka saartay in bulshada Somaliland helaan garsoor u dhawra una fuliya heshiisyada iyo xuquuqaha distoorku u damaanad-qaaday.
3- Daahana ka qaaday in madax-banaanida garsoorku tahay mid af ah, oo aan qaban karin waawaynka, una xoog wayn masaakiinta.
4- In qudhunka qabyaalada loo kala dheereeyo, doorashadiina noqoto reero tartamaaya, halkii ay ka ahayd xisbiyo tartamaaya.
5- Daahana ka qaaday mid ka mida ujeedadii Madax-wayne Siilaanyo ugu magacaabay Adan Haji Cali Gudomiyaha Maxkamada Sare, taas oo ahayn in uu gacantiisa ku gawraco Xaqii iyo Musharaxnimadii Jamal C. Xuseen mar haday isku Ciisa Muse yihiin, hagbadii Sacad Muse ku lahaana celiyo.
6- Seesna u noqtay kala yaaca bulshada somaliland, waana mida Masuuliyadeeda koowaad uu leeyahay Gudomiyaha Maxkamada Sare, iyadoo ahayd waajib distooriya iyo xeerba duwshiisa saarayeen, in uu ku garsooro siday dhigayeen.
7- In Xisbiga UCID noqdo mid burbura, kana dhigtay mid sameeyay waxay bulshadu maraga ka wada tahay.
Qorshaynta iyo fulinta gafkaas qaranka iyo bulshadaba ay ka galeen Madax-wayne Siilaanyo iyo Gudomiye Adan Xaji Cali waa mid khiyaamo qaran ah, waana mid malin ay noqotaba la isku la xisaabtamaayo.